Vaovao - Famaritana ny fampiasana hosotra
Famaritana ny fampiasana hosoka
Ny efitrano fitehirizana dia tsy maintsy milamina, misy rivotra ary ampy tsara. Ny mari-pana ambony manodidina ny + 45 ° C raha tsy misy fikorianan'ny rivotra dia mety hiteraka fahasimbana maharitra amin'ny fantson-plastika. Azafady mba mariho fa na dia ao anaty kofehin-tsolika mifono fonosana aza dia azo atao amin'ny tara-masoandro mivantana io mari-pana io. Ny haavon'ny stacking maharitra dia tsy maintsy ampifanarahana amin'ny vokatra mifanaraka aminy sy ny mari-pana manodidina. Ny lanjan'ny enta-mavesatry ny fantsom-pandrefesana dia avo amin'ny mari-pana amin'ny fahavaratra ary mety hihena. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa tsy misy fihenjanana amin'ny fantsona ary noho izany dia tsy misy ny adin-tsaina, ny tsindry na ny adin-tsaina hafa, satria ny fihenjanana dia mampiroborobo ny fahasimbana maharitra sy ny famakiana. Ho an'ny fitehirizana ivelany, ny fantson-tsolika dia tsy tokony hampiharin'ny masoandro mivantana. Ny fonosana dia tsy hasiana tombo-kase ny kofehy fantsom-pifandraisana. Miankina amin'ny vokatra, ny selika plastika dia tsy maintsy arovana amin'ny taratra ultraviolet sy ozon maharitra.
Fitaterana ny fantsom-by
Noho ny fivezivezena mitohy, ny enta-mavesatra amin'ny fantson plastika dia lehibe lavitra noho izay nateraka nandritra ny fitahirizana. Amin'ny fahavaratra, ny hafanana avo any ivelany, ny fanangonana hafanana amin'ny kamio sy ny fihozongozona tsy tapaka mandritra ny fitondrana fiara dia mety hitarika fiovana maharitra amin'ny fantsona. Noho izany, amin'ny hafanana ambony, ny haavon'ny stack mandritra ny famindrana dia tokony ho ambany noho ny haavony mandritra ny fitehirizana. Mandritra ny fitaterana, ny fantson-plastika dia tsy hatsipy, hotaritarihina amin'ny tany, hotorotoroina na hanitsaka. Izany dia mety hiteraka fahasimbana amin'ny sosona ivelany, ary ny helix dia mety ho simba na ho simba tanteraka mihitsy aza. Tsy mandray andraikitra izahay. Tokony harahina araka izany ny fijerena sao tsy miteraka fahasimbana ny fikirakirana diso.
Fihetsika momba ny mari-pana amin'ny fantsom-panafody
Tsy toy ny fantson-tady, ny hatsiaka sy ny mafana dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fantsom-plastika. Ny fantson-plastika dia manova ny fahafaha-miovaova amin'ny antonony na maripana ambany na maripana ambony. Amin'ny maripana ambany dia mihamafy izy ireo mandra-pahatonga azy ireo ho marefo. Ny fatran'ny plastika dia azo alaina amin'ny alàlan'ny hafanana avo be eo akaikin'ny teboka voatondro manokana ao anaty plastika. Noho ireo toetra ireo, ny tsindry sy ny fantsom-pahatsiahivana amin'ny fantsom-plastika dia mifandraika amin'ny mari-pana amin'ny mpanelanelana sy ny tontolo manodidina ny + 20 ° C. Raha miodina amin'ny mpanelanelana na tontolo iainana ny mari-pana dia tsy afaka miantoka ny fanarahana ireo voalaza ireo toetra ara-teknika.
Ny fiantraikan'ny tara-masoandro amin'ny fantsom-bokatra PVC
Ny taratra ultraviolet avy amin'ny masoandro dia manafika ny fantsom-bokotra PVC ary manimba azy ireo rehefa mandeha ny fotoana. Izany dia mifandraika amin'ny faharetan'ny tara-pahazavana sy ny tanjaky ny taratra masoandro, izay mazàna dia kely kokoa any avaratr'i Eropa raha oharina amin'ny atsimon'i Eropa. Noho izany dia tsy azo omena ny vanim-potoana marina. Amin'ny alàlan'ny fampidirana stabilizer UV manokana, ny fahamendrehan'ny fantsona plastika taratra UV dia azo ahena, fa tsy mijanona tanteraka. Ireo stabilisatera ireo dia manome taratra ultraviolet mitohy. Ny sasany amin'ireo karazana fantsom-bokotra ataontsika dia mifamatotra amin'ireo stabilisatera UV ireo ho fenitra hiantohana ny androm-piainana maharitra amin'ny tara-pahazavana mivantana. Raha ny fangatahana dia misy karazana fantsom-pifandraisana azo apetraka amin'ny stabilisatera UV amin'ny fepetra manokana.
Fanerena sy ny fantsom-pivoaran'ny fantsom-panafody
Ny fantsom-panafody ara-dalàna dia amin'ny karazany rehetra, miaraka amin'ny lamba toy ny mpitondra tsindry. Ny karazana fantsom-pifandraisana rehetra misy plastika na vy vy dia fantsom-bitsika. Ny fantsona rehetra dia azo ovaina ny halavany sy ny savaivony ary azo ahodinkodina na dia ao anatin'ny tsindry voatondro sy ny soatoavina poakaty aza. Na dia eo ambanin'ny toe-piainan'ny laboratoara aza dia ara-dalàna ny halavany sy ny boriborin'ny hosotra misy lamba toy ny bracket pressure. Noho izany, ny fepetra miasa rehetra izay miala amin'ny famaritana dia misy fiatraikany lehibe kokoa amin'ny fitondran-tena amin'ireo vokatra ireo. Ny fantsom-boaloboka rehetra miaraka amin'ny tadiny fa tsy misy fanamafisana ny lamba polyester dia mety amin'ny fantsona tsindry voafetra ihany, fa ampiasaina indrindra amin'ny fampiharana tsiranoka. Raha ny famolavolana azy, ny halavan'ireo karazan-tsolika ireo dia afaka miova foana mandritra ny fampiasana azy, hatramin'ny 30% ny halavany, na dia ao anatin'ny tsindry voatondro sy ny soatoavina poakaty aza. Ny mpampiasa dia tsy maintsy mihevitra ny mety ho fiovan'ny halavany sy perimeter ary ny fihodinan'ny fantsom-pifandraisana mandritra ny fampiasana azy. Amin'ny faran'ny serivisy dia tsy tokony hamboarina fohy toy ny fantsona ny fantsona, fa tsy maintsy afaka mihetsika malalaka amin'ny fotoana rehetra. Amin'ny tany dia azo apetraka amin'ny fantsona ampy habe fotsiny ny fantsona. Amin'ity dingana ity dia tokony hodinihina ihany koa ny fiovana mety hitranga rehetra amin'ny géometry hosotra. Mamporisika anao mafy izahay hamaritra ny fomban'ny fantsona ampiasain'ny fitsapana mialoha ary avy eo apetrakao. Rehefa ampiasaina ny fantsom-boaloboka, dia mety hihena ny savaivony anatiny amin'ny fotoana iray ny fanitarana sy ny fihodinan'ny fanerena. Ho an'ny fantsom-by miaraka amin'ny visy vy dia tsy afaka manaraka tanteraka ny fihenan'ny savaivony anatiny ny visy. Vokatr'izany dia afaka mamakivaky ny rindrin'ny fantsom-panafody mankany ivelany ny visy ary manimba ny fantsona. Noho ny fampiasana maharitra ao amin'ny faritra mavesatra loatra, dia matetika izahay no manolo-kevitra ny hampiasa lamba toy ny fantsom-pitaterana tsindry. Manakana ny fanitarana tafahoatra izany.
Miorina amin'ny DIN EN ISO 1402. - 7.3, ny tsindry tapaka ny fantsom-pifamoivoizana sy ny fantsom-panafody dia voafaritra manodidina ny 20 ° C, ary ny rano dia ampiasaina ho mpanelanelana amin'ny tsindry.
Mampiasà fitambarana fantsona
Amin'ny fampiharana suction, ny fantson-tsolika plastika dia azo ampifandraisina amina karazana kojakoja misy amin'ny varotra isan-karazany. Amin'ny fampiharana, ny fantsona dia manintona mafy ny mpiraikitra ary voaisy tombo-kase. Amin'ny fampiharana tsindry, ny selan'ny spiral dia sarotra kokoa ary mitaky famehezana maharitra noho ny fihenan'ny soritr'aretina sy ny savaivony. Ny kojakojam-bokin'ny vokatra 989 dia namboarina manokana ho an'ny karazana fantsom-panazavana ary tena mety amin'izany. Rehefa mampiasa kojakoja mahazatra, azafady mba mangataka ny toro-lalana momba anay tsirairay avy. Mampiasà fantson-doko vita amin'ny lamba PVC mba hahazoana antoka fa ny hamafin'ny alàlan'ny fitaovana dia ambany lavitra noho ny an'ny fingotra. Vokatr'izany, ny mety dia mety tsy misy sisiny maranitra rovitra rehefa manangona ny sosona anatiny. Raha ny fantsom-pifandraisana plastika dia azo antoka amin'ny fantsom-pifandraisana amin'ny alàlan'ny cartridge pression na clamp hose dia alao antoka fa ampiharina amin'ny hery farany ambany indrindra ny tsindry. Raha tsy izany, ny sosona fantsona dia mety ho voarangotra eo amin'ilay lamba amin'ny alàlan'ny mpampitohy na ny fantsom-pohy
Fotoana fandefasana: Nov-24-2020